Friday, 28 Dec, 2018 1:57 PM
१३ पुस, काठमाडौं । मोबाइल बिना मानिसको दैनिकी कल्पना गर्न मुस्किल पर्ने दिन आइसकेको छ । प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल दैनिक काममा अपरिहार्य पनि बनेको छ । अब मोबाईलको महत्व केबल फोन सम्पर्कका लागि मात्रै पनि रहेन । इन्टरनेटको दुनियाँमा मोबाइलभित्रै विश्व कैद भइसकेको छ । त्यसैले मोबाइलबाटै विश्व घुम्न र बुझ्न सक्छ मानिस । यसकारण पनि मान्छे अहिले महँगो र सुविधायुक्त मोबाइलमा आकर्षित छ । मोबाईलमा महत्वपूर्ण डाटा, सम्पर्क नम्बर, तस्बिरदेखि भिडियोलगायत धेरै कुरा हुन्छ । तर, जब मानिसको त्यो मोबाईल हराउँछ अथवा टुटफुट हुन्छ, त्यतिबेला निकै तनावमा आउँछ । एकातिर मोबाईल हराउनुको पीडा, अर्कातिर त्यसमा भएका सम्पर्क नम्बर र डाटा हराएपछि तनाव नहुने कुरै भएन । तर, अब विदेशमाजस्तै नेपालमा पनि मोबाईल इन्स्योरेन्स र त्यससँगै हुने डाटा सुरक्षा गर्न सकिने भएको छ । मेरो सुरक्षा प्रालिले प्रिमियर इन्स्योरेन्ससँगको सहकार्यमा मोबाईल इन्स्योरेन्स गर्दै आएको छ । मोबाईल सुरक्षा, इन्स्योरेन्स र डाटा रिकभरीका विषयमा हामीले मेरो सुरक्षा प्रालिका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत प्रेम सुनारसँग कुराकानी गरेका छौँ :
नेपालमा पहिलो पटक सुरू गर्नुभएको छ रु कसरी आयो मोबाईल सुरक्षाको विषयमा धारणा ?
मानिसले आफ्नो मोबाईलको इन्स्योरेन्स कसरी गर्न सक्छ रु कहाँ र कसरी गर्ने ?
अहिले हाम्रो सेवा उपत्यकामा मात्र सुरु गरेका छौँ । उपत्यकाबाहिर छिटै सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । यसमा अनलाइन र अफलाइन दुबै तरिकाबाट इन्स्योरेन्स गर्न सकिन्छ । नयाँ मोबाईल किन्ने हो भने मोबाईल किन्ने पसलमा यो सेवा उपलब्ध छ । यदि मोबाईल किनिसक्नु भएको छ र इन्स्योरेन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर मोडल नं। सेलेक्ट गरेर विवरण भर्ने र इसेवा, खल्तीजस्ता पेमेन्ट गेटवे तथा विभिन्न कमर्सियल बैंकका इबैंकिङ र मोबाईल बैंकिङमार्फत् रकम भुक्तानी गरेर इन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको भेरिफिकेसन भएपछि हाम्रो भेरिफिकेसन टिमबाट फोन आउँछ । त्यसपछि इन्स्योरेन्स एक्टिभ हुन्छ ।
कुन–कुन अवस्थामा इन्स्योरेन्स दाबी गर्न पाईन्छ रु कस्तो अवस्थामा नयाँ पाइन्छ, कस्तो अवस्थामा मर्मत हुन्छ ?
तपाईँले मोबाईल हराउनुभयो अथवा चोरी भयो भने नयाँ पाउनुभयो । इन्स्योरेन्स पोलिसी लिदाँ नै यसको सम्पूर्ण जानकारी दिइन्छ । मोबाईलमा दिईने वारेन्टि बाहेकका हामी गर्छौँ । टुटफुट भएको, पानीमा परेको अथवा कुनै तरल पदार्थ पोखिएको अवस्थामा सुरुमा मोबाईललाई बनाउन कोसिस गछौँ । यदि बनेन भने नयाँ दिन्छौँ । यसमा आगलागी र पानीबाट क्षति, मोबाईल हराउँदा, चोरी हुदाँ, मोबाईल फुट्दा हुने क्षति हामी बेहोर्छौँ ।